Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Ka ganacsiga dadka waa dambi caalami ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Inta badan qof kasta oo ka mid ah wershadaha safarka iyo dalxiiska ayaa isku raaci kara in ka ganacsiga dadka uu yahay dambi. UNWTO oo hoggaanka hadda haysa ayaa meesha ka saartay Hawl -galkii Ka -faa'iidaysiga Galmada ee Carruurta, waxa aan meesha ka saarin arrintan muhiimka ah. WTTC ayaa taagan. WTN waxay bogaadineysaa dadaalka WTTC ee tilmaamaya dhinaca mugdiga ah ee dalxiiska, ka ganacsiga dadka.
The Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa soo saartay warbixin cusub oo weyn oo tilmaamaysa sida waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee caalamiga ahi gacan uga geysan karto ciribtirka tahriibinta dadka.
Warbixinta waxaa lagu sii daayay iyada oo taageero laga helayo Carlson Family Foundation waxayna ku dhisan tahay WTTC's Taskforce Taskforce, oo la bilaabay 2019 Shirweynihii Caalamiga ahaa ee Seville, Spain.
Warbixintooda 'Ka -hortagga Ka -ganacsiga Dadka: Qaab -dhismeedka Waxqabadka ee Waaxda Socdaalka & Dalxiiska, WTTC waxay ujeeddadeedu tahay in la xoojiyo iskaashiga dhammaan daneeyayaasha lana wadaago dhaqannada ugu wanaagsan si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan sida waaxdu u samayn karto, oo u samaynayso, isbeddel, si wax -qabad leh wax looga qabto dembi.
Warbixintu waxay faahfaahinaysaa qaab -hawleed wax lagaga qabanayo ka ganacsiga dadka, ilaa afar tiir oo waaweyn: Wacyi -gelin, Waxbarasho & Tababar, U -doodid, iyo Taageero.
Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO) ayaa ku qiyaasay in maalin kasta oo la xuso 2016, in ka badan 40 milyan oo qof oo adduunka ku nool ay ahaayeen dhibanayaal ka ganacsiga dadka.
Faafida ma aha oo kaliya inay iftiimiso farqiga u dhexeeya sinnaan la'aanta hore laakiin waxay uga sii dartay. Tani waxay dardar gelisay baahida degdegga ah ee tallaabooyinka la beegsanayo ee ka dhex jira Waaxda Socdaalka & Dalxiiska.
Warbixintu waxay soo bandhigaysaa xalka gudaha iyo dibaddaba, maaddaama kakanaanta dembiyadan ka-gudubka ay u baahan tahay dadaal dhinacyo badan leh iyo tallaabo isku-dhafan oo daneeyayaasha, sida dawladaha, shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo ururrada caalamiga ah ee adduunka oo dhan.
Waaxda Socdaalka & Dalxiiska, tan micnaheedu waa ku lug lahaanshaha khibradda dhammaan daneeyayaasha, oo ay ku jiraan kuwa badbaaday, iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka si loo sameeyo hindisayaal wadajir ah.
Virginia Messina, Madaxweyne -ku -xigeenka Sare, iyo Ku -simaha Maamulaha, WTTC ayaa tiri: “Ka ganacsiga dadka waa dambi caalami ah oo ugaarsada dadka nugul, sii wada inuu koro oo saameeyo nolosha malaayiin adduunka oo dhan.
“Warbixintan muhiimka ah waxay bixisaa qaab -dhismeed loogu talagalay waaxda Socdaalka & Dalxiiska si ay u qaadato kaalinteeda si ay gacan uga geysato la -dagaallanka tahriibinta dadka. Marka la fiiriyo mowqifka khaldan ee waaxda ee dariiqa dadka wax tahriibiya, waxaan u baahannahay inaan qaadno mas'uuliyaddeena si aan u hubinno in Waaxda Socdaalka & Dalxiiska ay siiso jawi ammaan iyo soo dhaweyn leh kuwa ka dhex shaqeeya.
“Ugu dambayntii, safarku waa wax dadka isu keena, waana muhiim in aan si firfircoon uga caawino wax ka qabashada dembigan.
“Waaxdu waxay u baahan tahay hab isku duuban oo xoogga saara dadaalkeeda ku aaddan u -ololaynta hore ee la xidhiidha ka -ganacsiga dadka iyada oo la hawlgelinayo dhammaan daneeyayaasha muhiimka ah. Waxaan rajaynaynaa in warbixintani ay wax ka tari karto hawshaas. ”
Warbixintan qotada dheer waxay iftiiminaysaa baahida loo qabo in laga shaqeeyo fududeynta hab kor u qaadaya fahamka dembiyada ka ganacsiga dadka, awood u siinta aqoonsi, ka-hortag, iyo yareynta saameynta iyo saamaynta dhabta ah ee waaxda, iyo iskaashi dheeraad ah hubi in tallaabooyinka ku habboon ay qaadaan dawladuhu marka la ogaado ka ganacsiga dadka.
Warbixinta waxaa la bilaabay ka hor Maalinta Caalamiga ah ee Ka Hortagga Tahriibinta Dadka (30ka Luulyo), taas oo muujinaysa muhiimadda ay leedahay in la dhegeysto oo wax laga barto dadka ka badbaaday tahriibinta dadka.
WTTC waxay sidoo kale jeclaan lahayd inay u mahadceliso ururada soo socda ee gacan ka geystay warbixintan muhiimka ah: Carlson, CWT, AMEX GBT, International International, Hilton, Ingle, JTB Corp, ECPAT International, Airbnb, AIG Travel, Bicester Village Shopping Collection, Emirates, Expedia Group, ITF, Waa Ciqaab, Aragti Marano.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka ayaa bogaadinaya dadaalka WTTC ee wax looga qabanayo mawduucan muhiimka ah oo mugdiga ah.
Ogosto 1, 2021 markay tahay 21:53
Waad ku mahadsan tahay Juergan soo dhajinta tan. . Ka -ganacsiga Carruurtu waa kan ugu naxdinta badan, gaar ahaan kuwa loo adeegsado xadgudubka galmada caadada ah. https://www.jonwedgerfoundation.org/rains-list Markasta oo dadku ogaadaan dambiyadan ka dhanka ah aadanaha, intaan ka sii badan ayaan ka dhigi karnaa inay joojiyaan.